Wax Ka Baro Guddiga Garsoorka, Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Ee Golaha Shacabka – Kalfadhi
Wax Ka Baro Guddiga Garsoorka, Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Ee Golaha Shacabka
Arrimaha ugu muhiimsan ee guddiga horyaalla
In guddigu si qotadheer ugu fiirsado dub-u-eegista axkaamta dastuurka federaalka ee saameeya dhismaha laanta garsoorka, nidaamka garsooridda Soomaaliya iyo shuruucda garsoorka.
In guddigu fiiro dheer u yeesho dejinta shuruucda loo soo jeediyo oo looga gol leeyahay hergilinta federaaleynta garsooorka iyo isbedeellada lagama maarmaanka loo arkay layslana meel dhigay.
Dardar gelinta dhammeystirka Golaha Sare ee Adeegga Garsoorka iyo guddiyada kale ee dastuuriga ah oo dhiman si loo dhiso garsoor qaran oo madax bannaan una adeegaya dadweynaha Soomaaliyeed.
In uu hubiyo habraac caadil ah oo ay ku imaanayaan xubnaha Golaha Adeegga Garsooryaasha iyo magacaabidda garsoorayaasha iyo hawlwadeennada laanta garsoorka.
Arrimaha Diinta iyo Awqaafta
Mabaadi’da aasaasiga ah ee dastuurka federaalka qodobkiisa 3-aad wuxuu farayaa in la ilaaliyo maqaasidka shareecada, saa daraadeed waxaa laga maarmaan ah in fiiro gaar ah loo yeesho dhisidda iyo horumarinta hay’ado u xilsaaran fududeynta waajibaadka iyo fulinta horumarinta dhaqanka Islaamka.
Sidaas darteed guddigu waa in uu diiradda saaraa
Howlaha loo baahan yahay inuu Guddigu diiradda saaro
In uu abaabulo cilmi baarisyo kala duwan kuna sameeyo sida ugu wanaagsan ee uu caalamku ugu dhaqmo shuruucda iyo howlaha iyo xilalka guddi loo igmaday.
In uu darso howlaha xil ahaan ugu abbaaran ee ku xusan ama loo baahanyahay in lagu soo daro qorshaha horumarinta qaranak ee 3-da sano.
In uu fuliyo korjoogteynta howlaha ay fuliyaan wasaaradda dowladda ama hey’adaha dowladda iyo hay’adaha madaxa bannaan ee xil ahaan ugu abbaaran guddigan.
In uu si mideysan golaha ugu diyaariyo warbixinno iyo howlgallada guddiga si kulanka guud ee Golahu ugu doodo guddigana uu u jiheeyo.
Xigasho: Buugga qorshe-hawleedka guddiyada Golaha Shacabka
Dhageysiga aragtida dadka ee Sharciga Xaq-siinta Ciidanka oo Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyey
Xildhibaan Mahad Salaad: Guddoomiye Kuxigeennada Golaha Shacabka waxay ku tunteen Sharciga